Photocall TV၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို DTT ကိုကြည့်ရှုရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးစရာတစ်ခု။ | Linux မှ
Photocall TV၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို DTT ကိုကြည့်ရှုရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးစရာ
Joaquín Garcia က Cobo | | applications များ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
COVID-19 အကျပ်အတည်းပြီးနောက်အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သုံးစွဲမှုသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ တိုးလာခြင်းကြောင့်ဤသို့သော ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဆာဗာများ၏အရင်းအမြစ်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းအရည်အသွေးကိုလျှော့ချခဲ့ရသည်။ ရိုးရိုးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နှင့်တူသောအရာသည်ယခုအခါ ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေသည့်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာသည်။ Photocall TV သို့မဟုတ် Pluto TV ကဲ့သို့သောမီးမောင်းထိုးပြသည့်ဝန်ဆောင်မှုများသည်အခြားသူများအကြား။
အွန်လိုင်းရုပ်မြင်သံကြားသည်ဒီဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးတွင်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်streaming ရုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ မကြာသေးမီလများအတွင်းပါ ၀ င်သောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဝဘ် application များအသုံးပြုခြင်း အခမဲ့ DTT နှင့်ပုဂ္ဂလိကလိုင်းများကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်။ သင့်၏အများစုက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တယ်လီဗေးရှင်းမှပေးသောအရာနှင့်တူသည်ဟုပြောလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာထိုဝန်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မဆိုအကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန် ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည့်ကြော်ငြာအရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။
1 Photocall TV ဆိုတာဘာလဲ။
2 Photocall TV နဲ့ဘယ်လိုင်းများကြည့်လို့ရမလဲ။
3 Photocall TV ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
4 ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားမှ Photocall TV ကိုမည်သို့ကြည့်မည်နည်း
4.1 Chromecast ကို
4.5 Photocall TV အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများ
4.6 pluto တီဗီ
4.9 eFilm နှင့် TV Apps များ
Photocall TV ဆိုတာဘာလဲ။
မကြာသေးမီလများအတွင်း DTT နှင့်အခြားလိုင်းများကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန် application အမြောက်အများကိုဖန်တီးခဲ့ကြသော်လည်းကံမကောင်းစွာပင် ဤအပလီကေးရှင်းအားလုံးသည်အသက်ရှည်ရှည်မရှိကြပါ သို့မဟုတ်သူတို့စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော် Photocall တီဗီအပလီကေးရှင်းသည်ကောင်းမွန်သောဘဝရှိပြီးသား ဖြစ်၍ မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Photocall တီဗီ ထုတ်လွှင့်သောရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် လုံးဝတရားဝင်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် အရာဖွင့် DTT လိုင်းများထုတ်လွှင့်။
Photocall TV တွင်ရုပ်ရှင်များ၊ ဇာတ်လမ်းများနှင့်ပရိုဂရမ်များကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြည့်ခြင်းထက်ကျော်လွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ကွဲပြားသောကိရိယာများပေါ်တွင် DTT ကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းအပြင်၊ Photocall TV ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည် streaming များမှတဆင့်ရေဒီယိုလိုင်းများကိုနားထောင်ပါ, DTT ရုပ်သံလိုင်းများ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, DTT ရုပ်သံလိုင်းများ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများအတွက်အထူးပြုတစ်ဦး အစီအစဉ်များနှင့်သူတို့၏အချိန်ဇယားများနှင့်အတူတီဗီလမ်းညွှန် ချန်နယ်၏မူရင်းနိုင်ငံအတွင်းနှင့်အခြားတိုင်းပြည်မှကြည့်ရှုနိုင်မည့် VPN ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
Photocall TV တွင်ယခုအချိန်တွင် web version နှင့် Android အတွက် app တစ်ခုရှိသည် ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ ဒါပေမယ့် web version ကတော့ devices တွေနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ အခုမှစပြီး, ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ စမတ်တီဗွီနှင့်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတို့တွင်ရှိသည့်အမျိုးမျိုးသောတိုးချဲ့မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မဆိုလိုက်ဖက်သောပြonနာများမရှိဘဲသီးခြားပုံစံသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။
Photocall TV နဲ့ဘယ်လိုင်းများကြည့်လို့ရမလဲ။
လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် စပိန်နိုင်ငံရှိ DTT လိုင်းများအားလုံးနီးပါးကိုကြည့်ရှုပါဆိုလိုသည်မှာ La 1, La 2, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro, Mega, Neox စသည်တို့ကဲ့သို့သောအဓိကလမ်းကြောင်းများအပြင် TV3, Telemadrid, ETB သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ တူးမြောင်း Sur, ဖြတ်သန်း DTT ရုပ်သံလိုင်းများ EuropaPress လိုမျိုး ဘောလုံးကလပ်၏ DTT လိုင်းများ Real Madrid channel ဒါမှမဟုတ် FC Barcelona channel လိုမျိုး။
ဒီကဏ္inမှာတွေ့ရမဲ့နိုင်ငံတကာလိုင်းတွေကတော့ DTT သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှတဆင့်ထုတ်လွှင့်သောအခြားနိုင်ငံများမှလိုင်းများနှင့်၎င်းတို့မှသူတို့၏အဓိကချန်နယ်များကိုတွေ့ရမည် သို့မဟုတ်သတင်းလိုင်းများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်တော်တို့မှာယူကေမှာဘီဘီစီရုပ်သံလိုင်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့မှာဘီဘီစီ ၂၊ ဘီဘီစီသုံး၊ ဘီဘီစီ ၄ လိုင်းမရှိဘူး။ အခြားနိုင်ငံများရှိအခြားလမ်းကြောင်းများနှင့်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီလိုင်းများကိုသူတို့ထုတ်လွှင့်တဲ့မူရင်းဘာသာစကားနဲ့တွေ့နိုင်တယ်။ ငါတို့မှာအင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးဒါမှမဟုတ်စပိန်ဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုမှာမဟုတ်ဘူး အရင်းအမြစ်လိုင်းများအဲဒီလိုလုပ်မဟုတ်လျှင်။
“ Other” အပိုင်းကိုအကြောင်းအရာအလိုက်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤလိုင်းများကိုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်အထိတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်သာသီးသန့်ထားရှိပါသည် Photocall TV ကဒီချန်နယ်တွေကိုအခမဲ့ပေးတယ်အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့်။ ဤချန်နယ်များ၏အခင်းအကျင်းများသည်မတူကွဲပြားသည်မီးဖိုချောင်သုံးလမ်းကြောင်းများသို့မဟုတ်ကလေးများနှင့်လူငယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်သမိုင်းကြောင်းအရရုပ်သံလိုင်းများအထိပြည်တွင်းရေးလမ်းကြောင်းများအထိဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Photocall TV သည်အခင်းအကျင်းတစ်ခုစီ၏ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာစုဆောင်းရုံတင်မကဤအခင်းအကျင်း၏အကျော်ကြားဆုံးလိုင်းများသို့မဟုတ်ထိုဆောင်ပုဒ်၏ DTT လိုင်းများအားလုံးကိုစုဆောင်းသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာပင်အဓိကရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများသည်သူတို့၏အစီအစဉ်များကိုအင်တာနက်ပေါ်မှထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့် Photocall TV သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမရှိသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနိုင်သည် Photocall TV section သည် online မှထုတ်လွှင့်သောရေဒီယိုလမ်းညွှန်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အသုံးဝင်တဲ့အရာ။
Photocall TV ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
Photocall TV ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာဤလျှောက်လွှာတွင်ရှိသည်။ အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် DTT ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုစီ၏အမှတ်တံဆိပ်များရှိအိုင်ကွန်များရှိသည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်ရန်ညွှန်ကြားလိမ့်မည်။ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု၏အရည်အသွေးသည်ရုပ်သံလိုင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အရာက resolution 720 or 1080 နဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် channel စာရင်းသို့ပြန်လိုပါက web browser သို့မဟုတ် app ၏နောက်ကျောခလုတ်ကိုသာနှိပ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် channel list သို့ပြန်သွားပါမည်။ ကျွန်တော်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် web browser tab ကိုပိတ်ရပါမယ်။
Photocall TV တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့စက်၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ပြီးနောက်တစ်ခုသို့သွားရပါမည် ဝဘ်လိပ်စာ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် Android app သည်မရှိတော့တော့လက်ရှိ Photocall TV ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Photocall TV သည် ၀ က်ဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အခြားအပလီကေးရှင်းများမတတ်နိုင်သောသို့မဟုတ်မရှိသောအပိုလုပ်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် အစီအစဉ်များကိုမှတ်တမ်းတင် ဒီအတွက် Photocall TV ကနေတဆင့်ဖြန့်ချိတာက add-on အတွက်ပါ Stream Recorder ဟုခေါ်သော Chrome - MP4 အနေဖြင့် HLS ကို download လုပ်ပါ။ ဒီပလပ်အင်ကခလုတ်တစ်ခုထပ်ထည့်သည် ဝဘ်ဘရောက်ဇာတွင်မှတ်တမ်းတင်ပါ။ အစီအစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ထုတ်လွှင့်သည်။ ထို့နောက်အသံသွင်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးထုတ်လွှင့်နေသောအစီအစဉ်ကိုစတင်မှတ်တမ်းတင်မည်။ ဖိုင်ပြီးဆုံးသည်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ် add-on ၏ "ဆက်တင်များ" တွင်ကျွန်ုပ်တို့ညွှန်ပြသည့်နေရာတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားမှ Photocall TV ကိုမည်သို့ကြည့်မည်နည်း
Photocall TV သည် web application တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းစက်ကိုမတူညီသောကိရိယာများတွင် သုံး၍ မရနိုင်ပါဟုမဆိုလိုပါ။ နောက်ပြီးမင်းကိုပြောမယ် Photocall TV ကိုတီဗီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gadget တွေမှာဘယ်လိုသုံးနိုင်တယ်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့်ကွန်ပျူတာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ။
တီဗီအတွက်ဂူဂဲလ်၏ကိရိယာသည် Photocall TV နှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်စေရန်၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည် web browser ကိုဖြတ်ပြီး Chromecast စက်ကို mirrrorcasting လုပ်ရမယ်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာကို gadget သို့ပေးပို့သည်။ ဒီအသုံးပြုမှုရဲ့တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကကျွန်တော်တို့ဟာ Google Chrome, Chromium သို့မဟုတ် derivatives တွေကိုသေချာအောင်လုပ်ရမယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို Mozilla Firefox နှင့်သဟဇာတမဖြစ်ပါနိယာမအားဖြင့်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် browser ကိုပြောင်းလဲရန် (သို့) browser နှင့် chromecast အကြား mirrorcasts ပြုလုပ်ရန် add-on တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့မှာကွန်ပျူတာမရှိရင်တက်ဘလက်ဒါမှမဟုတ်စမတ်ဖုန်းကတစ်ဆင့်လုပ်မယ်ဆိုရင်၊ ဒီပစ္စည်းကနေတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပေးရပါမယ် လက်ခံရရှိအမှတ်အဖြစ် signal ကို chromecast ကို.
သတင်းအချက်အလက်များကို Amazon ရုပ်မြင်သံကြားစက်ပေါ်တွင်ဖွင့်လိုပါက၎င်းကိုနည်းလမ်းနှစ်နည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုက gadget ကို chromecast လိုသုံးပြီး၊ Casting app တစ်ခုမှတဆင့် Photocall TV အကြောင်းအရာကို Fire TV သို့ပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်နှင့် Fire TV ကဲ့သို့သော Screen Mirroring သို့မဟုတ် SendtoScreen တို့အကြား mirrorcasts ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။
ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်မော်နီတာကိုဆက်သွယ်ပြီးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်တေးဂီတကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်ကွဲပြားသောမော်ဒယ်များသို့မဟုတ်သေတ္တာများ၊ Photocall TV သည်၎င်းတို့အားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်း၏လည်ပတ်မှုအတွက် Fire TV လိုပဲ web browser ကနေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ minipcs အများစုဟာ Android OS ကို operating system အနေနဲ့အသုံးပြုကြတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ web browser ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် Fire TV လိုမျိုး mirrorcasting app များကိုသုံးပါ.
အက်ပလီကေးရှင်းတွင်မူလတွင် Photocall TV အက်ပလီကေးရှင်းမရှိခဲ့သော်လည်းလက်ရှိတွင်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် Apple စက်ကိရိယာများသည် Android ထုတ်ကုန်များနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်၊ The နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ် ဒီ gadget ၏ iPhone သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည် စမတ်ဖုန်းကနေတဆင့်ကစားနိုင်ပြီး Apple TV ကိုပို့နိုင်တယ် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည် Apple TV မှကစား။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုအဝေးထိန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မင်းကြိုက်တာဘာ
Photocall TV အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများ
အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းမကြာသေးမီလများအတွင်းအွန်လိုင်းဖျော်ဖြေမှုများပြားလာခဲ့ပြီး၎င်းသည် Photocall TV ကိုအောင်မြင်မှုရစေရုံသာမကအောင်မြင်မှုလည်းဖြစ်စေခဲ့သည် အခြားဝန်ဆောင်မှုများသိသိသာသာအောင်မြင်သောဖြစ်ကြသည် နှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လူများကအသုံးပြုကြသည်။ Photocall TV အစားအသုံးပြုရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည် Android နှင့် Apple TV အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပေးထားပြီး၊ Photocall TV ကဲ့သို့၎င်းသည်အခမဲ့ပေးသောကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင် Photocall TV နှင့်ပြaနာရှိနေပြီး၎င်းမှာပြthatနာရှိနေသည် Pluto တီဗွီသည်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတစ်ခုစီကိုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာခွဲများဖြင့်သာပေးသည်သို့သော်၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ရေဒီယိုကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုမပေးပါ။ အပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်မှာ၎င်းသည် iOS နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါက၎င်းတွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသည်။
ယခုအချိန်အတန်ကြာအောင် Gnu / Linux အသုံးပြုသူများသည် Photocall TV အတွက်သာမကအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ Netflix သူ့ဟာသူနှင့်ယှဉ်ပြိုင် မည်သည့် platform ပေါ်တွင်မဆို ဒီဝန်ဆောင်မှုကို Plex လို့ခေါ်တယ်။
Plex ဆိုသည်မှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်တပ်ဆင်ထားသောဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆော့ဝဲဖြစ်သည် နှင့်အတူတကွ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ ထုံးစံ netflix ရယူပါ ငါတို့ကပုဂ္ဂလိကပိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသည့်ရေဒီယိုနှင့် DTT လိုင်းများကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ဤစနစ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသော minipc ဖြစ်နိုင်သည့်သီးသန့် server တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေ IPT စာရင်းမှတဆင့် DTT လိုင်းများကိုအွန်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှုပါ။ ဤအဖွင့်စာရင်းများသည် Spotify ဖွင့်ရန်စာရင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အဆင်မပြေမှုအချို့ကြိမ်နှုန်းနှင့် Channel IP လိပ်စာများသည်မကြာခဏပြောင်းလဲတတ်ပြီး၊ ထိုစာရင်းတွင်ထည့်ထားသောလိုင်းများသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ကောင်းမွန်သောအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာရင်းများကိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Android နှင့် iOS အတွက်ကစားသမားများစွာသည်၎င်းတို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်။ တောင်မှကျော်ကြားပြပွဲ VLC y Kodi ဒီတီဗီစာရင်းကိုဖွင့်ဖို့ option ရှိသည်။
eFilm နှင့် TV Apps များ
Photocall TV ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလက်ဖြင့်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတစ်ခုစီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပြီးကြည့်သည်။ တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒါကမကောင်းတဲ့အချက်ကငါတို့ install လုပ်ဖို့လိုတယ် Photocall TV နဲ့တူချင်ရင် apps ၁၀၀ ကျော်လုံခြုံမှုပြproblemsနာတွေကိုမမေ့စေဘဲ ကောင်းမွန်သောအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်သံလိုင်းကိုအရည်အသွေးမြင့်မားစွာကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ကိုလိုလားသည့်အခါတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စပိန်အစိုးရ၏ပြည်သူ့စာဖတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလပေါင်းများစွာစတင်ခဲ့သည် အခမဲ့အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးချေးငွေဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ်တယ် eFilm။ ဒီဝန်ဆောင်မှုသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ် eBiblio ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရုပ်ရှင်၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးအမြောက်အမြားကိုပြသထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် eBiblio ကိုအသုံးပြုရန်လိုသည်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ကောင်းသောအရာပါပဲ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုအခမဲ့ကြော်ငြာရှိသည်။ ဒါကမကောင်းတဲ့အရာကအဲဒါကို ၇ ရက်သာခံတော့မယ်၊ နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ချင်ရင်အသစ်ပြန်လုပ်ရမယ်။ ထို့အပြင်ဌလက်ကိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေဟာများသောအားဖြင့်မကောင်းဘူး Android နှင့် iOS နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
COVID19 အကျပ်အတည်းမတိုင်မီမှာပင်ကျွန်ုပ်သည် streaming မှတဆင့်ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြား ၀ န်ဆောင်မှု (သို့) ရုပ်မြင်သံကြားကိုအသုံးပြုနေပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်ပုံရသည် ငါတီဗီလိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းထက်သူတို့ကိုပိုမိုအသုံးဝင်ရှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားအရာတွေကြားထဲမှာသင်ကြော်ငြာကိုသိမ်းသည်။ ထို့အပြင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်မဟုတ်သောအကြောင်းအရာအလိုက်ရုပ်သံလိုင်းများသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်းများကဲ့သို့သောသင် ရယူ၍ မရနိုင်သောပရိုဂရမ်များကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာအတွက် hacker application များသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်သော application များနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီပါ။ အနည်းဆုံး Photocall TV နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တာတွေ။ Photocall TV အကြောင်းကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာသည်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများပါဝင်သည် သုံးသာ web ဝဘ်။ လျှင်အဖြစ် တီဗီလမ်းညွှန်တစ်ခုနဲ့သူတို့အားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်တယ်၀ က်ဘ်တွင်မကောင်းသောအလုပ်မလုပ်ပါကမှားယွင်းနေသောအကြောင်းအရာအမှားများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ (သို့) တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်တတ်သည့်သုံးစွဲသူများအလွန်များပြားသည်။
ဒါတွေအားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုနှင့်အားလပ်ရက်များနှင့်အတူဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ Photocall TV သည်ရုပ်မြင်သံကြားစက်များနှင့်မ ၀ င်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်, ငါတို့သာတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းသူ့ဟာသူလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Photocall TV၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို DTT ကိုကြည့်ရှုရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးစရာ
JUAN REYES GERRERO ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။ ဒါကိုငါအရင်မြင်ဖူးချင်တယ်၊ အဲဒါကိုကြိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့်အမေရိကဖလားပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့။ ငါဒီ website ကိုချစ်တယ်။
JUAN REYES GUERRERO သို့စာပြန်ပါ
Joaquín Garcia က Cobo ဟုသူကပြောသည်
ငါတို့ကိုဖတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ငါနောက်ကျတာတောင်မင်းကအသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ America's Cup ကရပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးနိုင်တယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!!!
Joaquin García Cobo သို့ပြန်ပြောပါ
Elizondo မှ Juan Reyes Guerrero ဟုသူကပြောသည်
ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ငါ Ubuntu 14.04 မှာငါဘလော့ဂ်ကိုသွားကြည့်တယ်
Elizondo မှ Juan Reyes Guerrero ကိုပြန်ပြောပါ
လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း
ငါအများအားဖြင့်ငါအကြိုက်ဆုံး linux mint distro ကို Hypnotix လို့ခေါ်တဲ့ပရိုဂရမ်ကိုသုံးလေ့ရှိတယ်၊ ငါအဲဒါကိုလုပ်ရတာအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုငါအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သတ္တိရှိတဲ့ဆုလာဘ်တစ်ခုနဲ့မင်းကိုငါရောက်ခဲ့တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ^^
CBL-Mariner, Microsoft ၏ Linux ဖြန့်ဖြူးမှုသည်ဗားရှင်း ၁.၀ သို့ရောက်ရှိသည်
Coursera API ရှိအားနည်းချက်တစ်ခုကအသုံးပြုသူ၏အချက်အလက်များပေါက်ကြားစေနိုင်သည်